NLD CEC ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုနဲ့ မေးမြန်းခန်း (၁)
25 နိုဝင်ဘာ၊ 2019
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုဖြစ်ရေးဟာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး အဲဒါတွေကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်သူဟာ NLD ပါတီဖြစ်တယ်လို့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုက ပြောပါတယ်။ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင် က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲက တော်တော်လေး နီးကပ်လာပြီ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ ရက်အတိအကျတော့ မကြေညာသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခန့်မှန်းရတာတော့ Timeline ကတော့ အရင်ရွေးကောက်ပွဲ ရက်တွေလောက်ပဲ သွားမယ်လို့တော့ အများစုက မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်တို့လည်း အဲဒီမျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပါတီလုပ်ငန်းတွေ့ သွားနေကြတာပေါ့။ NLD ကိုတော့ အားလုံးကမျှော်လင့်ထားတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း အနိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တော့ လူထုကြားထဲမှာ တော်တော်များများ ရှိထားတယ်။။ ဒါပေမဲ့လဲ တဘက်မှာ အထူးသဖြင့် ထောက်ပြစရာဖြစ်နေတာ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပါတီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ထိစပ်မှု နည်းနည်းလေး အားနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့ ထောက်ပြချက်တွေ ရှိနေတော့ ဝန်ကြီးချုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ပိုပြီးတော့ အနိုင်ရအောင်၊ ပိုပြီးတော့ စည်းရုံးရေးတွေ လုပ်ဖို့ရှိလား။ ဘယ်လို သွားဖို့ရှိသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ထိုးနက်ချက်တွေအမျိုးမျိုး ရှိကြတယ်။ ကျနော်တို့ကို မလိုလားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိမယ်။ အတိုက်အခံတွေ ရှိတယ်။ NLD သည် ဗမာပါတီ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ပြောကြတာတွေ ရှိတယ်။ သို့သော်လဲ ကျနော်တို့က သက်သေပြလို့ရတယ်။ ဗမာပါတီဆိုလို့ရှိရင် ရှမ်းပြည်နယ်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်ကို ရှမ်းဖြစ်စေ၊ ကယားပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာ ဗမာကိုပဲ ရွေးမှာပေါ့။ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဘယ်ရွေးမလဲ။ အခုကြတော့ ပြည်နယ်တွေမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဒေသခံတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေကိုပဲ ရွေးခဲ့တယ်။ ဥပမာ ဦးစံညွှန့်လွင် စသဖြင့်။ ဦးအေးသာအောင်၊ ဒုသမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်က ချင်းတိုင်းရင်းသား ဖြစ်ပြီးတော့ စသဖြင့်ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဗမာပါတီဆိုတဲ့ ထိုးနက်ချက်တစ်ခုပါ။
အဲဒီတော့ အတိုချုပ်အနေနဲ့ ရှင်းပြရရင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့၊ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပိုပြီးနားလည်မှုရအောင် တည်ဆောက်နိုင်ဖို့၊ ပိုပြီးလက်ခံနိုင်တဲ့ အစိုးရတရပ် တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ဘာတွေအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ ပန်းတိုင် ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်ဖို့၊ ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသော နိုင်ငံရေးပါတီသည် ဘယ်ပါတီတုန်း။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလွဲ ဘယ်သူကို သွားယုံအုံးမလဲ။ ဘယ်သူကို သွားအားကိုးအုံးမလဲ။ တတိုင်းပြည်လုံး၊ တကမ္ဘာလုံးက လက်ခံထားတဲ့ခေါင်းဆောင်၊ ဘယ်လိုမှမရနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုးကို ရထားတဲ့ အနေအထားမှာ သူ့ရဲ့ စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ အနစ်နာခံမှုတွေ၊ အရည်အချင်းတွေကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး အလိမ်မခံရဘဲနဲ့ တကယ့်ကို ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ လုပ်ပေးမယ့် ခေါင်းဆောင်နောက်မှာ ရှိနေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပဲ ကျနော်တို့က ယုံကြည်ကိုးစား ရှိစေချင်တယ်။ ဒါပဲ ကျနော်က ပြောမှာ။ ဗမာပါတီ မဟုတ်ဘူး။ ရှမ်းဆိုလဲ ရှမ်းကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးတယ်။ ကယားဆိုလဲ ကယားပြည်နယ် ကိုယ်စားလောင်း ရွေးတယ်စသည်ဖြင့် ဒါမျိုးရှိတယ်။ သို့သော်လဲ အကန့်အသတ်ရှိတာက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လုပ်ရတာ။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာက အာဏာရတဲ့၊ အနိုင်ရတဲ့ပါတီက ဝန်ကြီးချုပ်ကို ရွေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးတယ်။ ဒါမျိုးကတော့ ရှိတယ်။ နောက်တော့မှ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ နားလည်မှု တည်ဆောက်ပြီးတော့မှ ဒါကိုအဆင်ပြေအောင် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မယ်ဆိုရင်လဲ - မတိုင်ပင်စရာအကြောင်း မရှိဘူး - တိုင်ပင်မယ်၊ ညှိနှိုင်းမယ်၊ ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း ဘယ်သူရှိလဲ စသည်ဖြင့် .. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဒို့နဲ့ပြောလို့ နားဝင်နိုင်လား။ ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း လိုက်လျောညီထွေ ရှိမလား။ ဘယ်သူက လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်သလဲ။ ဒါတွေကို တိုင်းရင်းသားတွေ စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။ အခုပဲ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ဦးဆောင်ပြီး (၂၁) ရာစု ပင်လုံမှာ အခက်အခဲ အနောင့်အယှက်၊ အဟန့်အတား အမျိုးမျိုးကြားထဲက ကြိုးစားနေတာ။ အားလုံးအသိပါ။ ဒါပဲ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခု မကြာသေးချင်ကပဲ ဖြစ်သွားတာက ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ပြောသွားတာက ပြီးခဲ့တဲ့ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး အပြီးမှာ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကာလဖြစ်တယ်။ ဒါလဲ မှန်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေက ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့ကို လုပ်ဖို့ဆိုပြီး တောင်းဆိုနေကြတာက အသံက ပိုပြီးကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်နေတယ်ဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လုပ်မယ်။ ဖယ်ဒရယ်စနစ် ဖော်ဆောင်ရေးကို ဒုတိယ ဦးစားပေးအနေနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ပြောသွားတဲ့အပေါ်ကိုလဲ နည်းနည်းမကျေမနပ် ဖြစ်ကြတယ်။ ဆိုတော့ နှစ်ခုစလုံး တပြိုင်ထဲသွားလို့ မရဘူးလားဆိုတာမျိုး စောဒက တက်ကြတယ်။ အဲဒီအယူအဆနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီမိုကရေစီ အရင်လား၊ ဖယ်ဒရယ် အရင်လား။ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုပြိုင်တူလားဆိုတဲ့ အယူအဆအပေါ် ဝန်ကြီးချုပ် ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေနေ ဦးဇော်ဝင်းလှိုင်လဲ သိပါတယ် -- အင်္ဂလိပ်ဆိုရိုးစကားလည်း ရှိပါတယ်။ Every coin has two sides. ဆိုတာမျိုးလို ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်တော့ ခေါင်း၊ သူ့ဘက်ကကြည့်တော့ ပန်း ဆိုတာမျိုးလို၊ ကျနော့်ဘက်ကကြည့်တော့ လက်ဖမိုး၊ ခင်များဘက်ကကြည့်တော့ လက်ဖဝါးပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်နေနေ အမျိုးမျိုးပြောကြတာတွေ ရှိတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို ဦးစားပေးမလား။ စီးပွားရေးကို ဦးစားပေးလုပ်မလား။ နှစ်ခုစလုံး ပြိုင်တူသွားမလား။ နှစ်ခုစလုံး ပြိုင်တူသွားသင့်တယ်လို့ ပြောတဲ့လူ ရှိသလို၊ ဘယ်ဟာကို ဦးစားပေး၊ ဒီဟာကို ဦးစားပေး ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေလည်း ရှိတယ်။ အမျိုးမျိုး ပြောကြတယ်။ ကျနော်ပြည်နယ်မှာဆို မူလတန်းကျောင်း ရွေးတယ်။ အလယ်တန်းကျောင်း ကျောင်းဆောင်ဆောက်ရမယ်။ ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုက ကျပ်တယ်။ မြို့ပေါ်ကကျောင်းကိုပေးရင် ရွာကလူက မကြိုက်ဘူး။ ရွာကိုပေးရင် မြို့ပေါ်က မကြိုက်ဘူး။ အဲဒီမှာ ကျနော်တို့က စဉ်းစားရတယ်၊ ချင့်ချိန်းရတယ်။ ဘယ်သူ့ဘယ်သူကို ပေးရမှန်းမသိဘူး။ မဲနိုက်လဲ မဲပေါက်တဲ့လူက ကျေနပ်တယ်။ မဲမပေါက်တဲ့လူက မကျေနပ်ဘူး။ လောလောဆယ်မှာ အဲဒီပြဿနာ ရှိနေတယ်။ ပြေလည်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ပြေလည်သွားလဲဆိုတော့ ရွာကျောင်းကို မန်းရေနံမြေက CSR ဆိုတဲ့ လူမှုတာဝန်သိမှုအရ Corporate Social Responsibility အရ သူ့ရန်ပုံငွေထဲက ရွာကျောင်းကို ဆောင်ပေးမယ်။ မြို့ပေါ်မှာပဲ အစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့ ဆောက်ဆိုပြီးရှိတယ်။ ဒါကတော့ ကြည့်တဲ့လူပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ စေတနာ၊ မေတ္တာ မှန်လို့ရှိရင်တော့ နားလည်မှုရှိတယ်။ အဆိုးမြင်နေရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းအောင်လုပ်နေ အဆိုးမြင်နေမှာပါ။
မေး ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြောလက်စနဲ့မို့ ရွေးကောက်ပွဲကိုပဲ ထပ်ပြောချင်တာ၊ မေးချင်တာက - ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့တာက လူကိုကြည့်မရွေးပါနဲ့၊ ပါတီကို ကြည့်ရွေးပါဆိုပြီး ပြောခဲ့တာကြောင့် ပါတီကို လူထုက အကုန်လုံးပုံအောပြီးတော့ ထောက်ခံမဲ ပေးခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ အဲဒီတုန်းက အယူအဆဟာ အကျုံးဝင်ချင်မှ ဝင်တော့မယ်။ နည်းနည်းပါတီရဲ့ မူဝါဒကိုပြောင်းပြီးတော့ လူကိုလည်း ကြည့်ရွေးကြပါဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းဘက်ကို သွားဖို့သင့်သလားဆိုတာကို ပါတီဗဟိုကော်မတီကြားမှာ ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ သိရတယ်။ အဲဒီလမ်းကိုပဲ အခုသွားဖို့ ချမှတ်လိုက်ပြီလား။ ၂၀၁၅ နဲ့ယှဉ်ရင် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ၂၀၂၀ က ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ။ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမျှော်လင့်ရမလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒါကလဲ ဘာကြောင့်ပြောရသလဲဆိုတော့ အင်မတန်ကို သတိထားရမယ့်အချက်ပါ။ တချို့မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေ - နာမည်တော့ ထုတ်ဖော်မပြောလိုဘူး။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၂၀၁၂ တုန်းက နိုင်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ မှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ရှုံးတယ်။ ကိုယ်နိုင်ရမယ့်နေရာတွေမှာ ရှုံးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘေးကကြားရတာ၊ ဝေဖန်ခံ သိရတာက ကိုယ်ပြောတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းထက် ကိုယ်က nominate လုပ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းထက် အတိုက်အခံပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် ရပ်ထဲရွာထဲမှာ လူရိုသေ၊ ရှင်ရိုသေ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုပဲကြည့်ကြည့်၊ ရပ်ရွာအကျိုးကို ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး၊ လူမှုရေးအပိုင်းတွေကို ဆောင်ရွက်တာပဲကြည့်ကြည့်၊ အဲဒီမှာ သူကို ရွာကလက်ခံနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာ ပိုကောင်းနေတယ်။ သို့သော် ဒီလူသည် အတိုက်အခံ ရွေးတဲ့အခါမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၊ နိုင်ငံရေး စိတ်မဝင်စားဘူး။ သူကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီးတော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်အောင် - ကျနော် နိုင်ငံရေးနားမလည်ဘူး။ နိုင်ငံရေး နားလည်စရာမလိုဘူး၊ ကျနော်တို့ဘေးကနေ လိုအပ်တာ ပံ့ပိုးမယ်၊ ဗဟုသုတဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမယ်။ လူကြီးမင်း အရွေးခံပေးပါ။ အရပ်က လူရိုသေ၊ ရှင်ရိုသေ လူတွေကို မရမက စည်းရုံးပြီးတော့ လုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ကတော့ ပါတီဝင်ဖြစ်တယ်။ ပါတီကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့လူ ဖြစ်တယ်။ သို့သော်လဲ အခုနကိစ္စတွေမှာ ရပ်ရွာက လက်ခံနိုင်သလား၊ လက်မခံဘူးလား။ လူရိုသေရှင်ရိုသေ ဟုတ်သလား၊ မဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ နေရာတွေမှာတော့ ယှဉ်လိုက်တဲ့နေရာမှာ အားနည်းနေတဲ့သဘောတွေ ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ ဒါကို ကိုယ်တွေက သတိထားရမယ်။ သတိမထားလို့ကို မဖြစ်ဘူး။ အရင်တုန်းက ပါတီကိုကြည့်ပါဆိုတာ အခြေအနေအရ ပြောတာ။ လူကိုအမြင်ကတ်လို့ ဘာညာမရှိဘူး။ တကယ်တမ်းမှာ ဘဝအပျက်ခံ၊ အသတ်အသေခံပြီး လုပ်နေတာ ဘယ်သူရှိလို့တုန်း၊ အဖွဲ့ချုပ်ပဲ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် အဖွဲ့ချုပ်နိုင်ဖို့။
အခြေအနေကလဲ ဦးဇော်ဝင်းလှိုင်လဲ သိတဲ့အတိုင်းပဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာဆိုရင် မဲစာရင်းပြုစုတာ တစ်ဖွဲ့က ပြုစုတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာက တစ်ဖွဲ့က လုပ်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုတွေကို ဆုံးဖြတ်တဲ့ တရားစီရင်ရေးက တစ်ဖွဲ့လုပ်တယ်။ သီးသန့် (၃) ဖွဲ့လုပ်တာ။ ဒီမှာကြတော့ မဲစာရင်းလုပ်တာ၊ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာ၊ မဲမသမှု၊ ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုတွေကို ဆုံးဖြတ်တာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လုပ်တာ။ အဲဒီအခြေအနေမှာ ကျနော်တို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဝင်ပြိုင်ရတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အပြတ်အသတ်နိုင်ဖို့ လိုတယ်။ ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်သာ မဲပေး ဒီလိုရပ်တည်ခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါအရ အခုနပြောသလိုမျိုး၊ Polish လုပ်တာမျိုး၊ … လုပ်တာမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုတော့ ကန့်ကွက်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။
မေး ။ ။ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်က ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် နောက်အစိုးရသက်တမ်းမှာ မကွေးတိုင်းမှာပဲ ဆက်ပြီးတော့ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့ ဆက်ရှိနေမလား။ ဒါမှမဟုတ် ပါတီက တခြားတာဝန်တခုခု ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီပေးအပ်တဲ့ တာဝန်ကိုလိုက်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားမလား။ ပါတီဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွာမယ့် သဘောရှိလား။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါက ဒီလိုရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တုန်းက ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အင်မတန် နည်းပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲထဲ ပါနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ ဥပမာအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် အင်မတန်မှန်တယ်။ အင်မတန်တော်တယ်။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုလည်း ရှိတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ လုပ်နိုင်သရွေ့ လုပ်နေမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ - ချောက်က ဆရာဦးမြင့်သိန်း၊ မြိုင်က ဦးမြင့်အောင်တို့ ဆုံးပါးသွားကြပြီ။ ဒါက ၉၀ ပြည့်တုန်းက ပါခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။ ၉၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါခဲ့တယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပါဝင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်။ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးတော့ ဒုက္ခသုက္ခမျိုးစုံ ကြုံရတယ်။ ဖိအားမျိုးစုံ ကြုံရပေမယ့် ခါးစည်းခံတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်က နုတ်ထွက်မပေးဘူးဆိုတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာ ကျနော်လည်းပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ အဲဒီအချိန်တုန်းက အသက်အငယ်ဆုံး ဖြစ်နေတယ်။ (၃၂ - ၃၃) နှစ်။ အငယ်ဆုံးထဲမှာ ပါနေတော့၊ ကျန်းမာရေးကလည်းကောင်းတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးဝင်းမြင့်၊ အမဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဆရာဇော်မြင့်မောင်တို့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကလည်း ကိုယ့်ကိုယ် ယုံကြည်ကိုးစားစွာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် တာဝန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်ပြီးတော့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တော့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရဖို့ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီ ပွညျထောငျစုဖွဈရေးဟာ အရေးအကွီးဆုံးဖွဈပွီး အဲဒါတှကေို အကောငျအထညျ ဖျောပေးနိုငျသူဟာ NLD ပါတီဖွဈတယျလို့ မကှေးတိုငျးဒသေကွီး ဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာအောငျမိုးညိုက ပွောပါတယျ။ ကိုဇျောဝငျးလှိုငျ က တှဆေုံ့မေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲက တျောတျောလေး နီးကပျလာပွီ၊ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကတော့ ရကျအတိအကတြော့ မကွညောသေးဘူး။ ဒါပမေဲ့ ခနျ့မှနျးရတာတော့ Timeline ကတော့ အရငျရှေးကောကျပှဲ ရကျတှလေောကျပဲ သှားမယျလို့တော့ အမြားစုက မြှျောလငျ့ထားကွတယျ။ ဝနျကွီးခြုပျတို့လညျး အဲဒီမြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ ပါတီလုပျငနျးတှေ့ သှားနကွေတာပေါ့။ NLD ကိုတော့ အားလုံးကမြှျောလငျ့ထားတယျ ပွီးခဲ့တဲ့ ရှေးကောကျပှဲမှာလညျး အနိုငျရခဲ့တယျ။ ဒီရှေးကောကျပှဲမှာလညျး အနိုငျရလိမျ့မယျဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတော့ လူထုကွားထဲမှာ တျောတျောမြားမြား ရှိထားတယျ။။ ဒါပမေဲ့လဲ တဘကျမှာ အထူးသဖွငျ့ ထောကျပွစရာဖွဈနတော တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုပါတီတှေ၊ အဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ထိစပျမှု နညျးနညျးလေး အားနညျးနတေယျဆိုတဲ့ ထောကျပွခကျြတှေ ရှိနတေော့ ဝနျကွီးခြုပျတို့ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော ပိုပွီးတော့ အနိုငျရအောငျ၊ ပိုပွီးတော့ စညျးရုံးရေးတှေ လုပျဖို့ရှိလား။ ဘယျလို သှားဖို့ရှိသလဲ။
ဖွေ ။ ။ ဒါကတော့ တိုငျးရငျးသားတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ထိုးနကျခကျြတှအေမြိုးမြိုး ရှိကွတယျ။ ကနြျောတို့ကို မလိုလားတဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှေ ရှိမယျ။ အတိုကျအခံတှေ ရှိတယျ။ NLD သညျ ဗမာပါတီ ဖွဈတယျဆိုတဲ့ ပွောကွတာတှေ ရှိတယျ။ သို့သျောလဲ ကနြျောတို့က သကျသပွေလို့ရတယျ။ ဗမာပါတီဆိုလို့ရှိရငျ ရှမျးပွညျနယျမှာ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ကိုယျစားလှယျကို ရှမျးဖွဈစေ၊ ကယားပွညျနယျ၊ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကခငျြပွညျနယျတို့မှာ ဗမာကိုပဲ ရှေးမှာပေါ့။ တိုငျးရငျးသားတှကေို ဘယျရှေးမလဲ။ အခုကွတော့ ပွညျနယျတှမှော ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို ဒသေခံတှေ၊ တိုငျးရငျးသားတှကေိုပဲ ရှေးခဲ့တယျ။ ဥပမာ ဦးစံညှနျ့လှငျ စသဖွငျ့။ ဦးအေးသာအောငျ၊ ဒုသမ်မတကွီးကိုယျတိုငျက ခငျြးတိုငျးရငျးသား ဖွဈပွီးတော့ စသဖွငျ့ရှိတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ဗမာပါတီဆိုတဲ့ ထိုးနကျခကျြတဈခုပါ။
အဲဒီတော့ အတိုခြုပျအနနေဲ့ ရှငျးပွရရငျ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရဖို့၊ တိုငျးရငျးသားတှနေဲ့ ပိုပွီးနားလညျမှုရအောငျ တညျဆောကျနိုငျဖို့၊ ပိုပွီးလကျခံနိုငျတဲ့ အစိုးရတရပျ တညျဆောကျနိုငျဖို့ ဘာတှအေရေးကွီးဆုံးလဲဆိုတော့ ဖယျဒရယျဒီမိုကရစေီ ပွညျထောငျစု ဖွဈဖို့က အရေးကွီးဆုံးပါ။ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးကိုယျတိုငျ ရညျရှယျခဲ့တဲ့ ပနျးတိုငျ ဖွဈတယျ။ အဲဒီတော့ ဖယျဒရယျဒီမိုကရစေီနိုငျငံ တညျဆောကျဖို့၊ ဖယျဒရယျစနဈကို အောငျမွငျအောငျ အကောငျအထညျ ဖျောပေးနိုငျစှမျးရှိသော နိုငျငံရေးပါတီသညျ ဘယျပါတီတုနျး။ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျကလှဲ ဘယျသူကို သှားယုံအုံးမလဲ။ ဘယျသူကို သှားအားကိုးအုံးမလဲ။ တတိုငျးပွညျလုံး၊ တကမ်ဘာလုံးက လကျခံထားတဲ့ခေါငျးဆောငျ၊ ဘယျလိုမှမရနိုငျတဲ့ ခေါငျးဆောငျမြိုးကို ရထားတဲ့ အနအေထားမှာ သူ့ရဲ့ စတေနာ၊ မတ်ေတာ၊ အနဈနာခံမှုတှေ၊ အရညျအခငျြးတှကေို ယုံကွညျကိုးစားပွီးတော့ တိုငျးရငျးသားတှအေားလုံး အလိမျမခံရဘဲနဲ့ တကယျ့ကို ရိုးသားဖွောငျ့မတျစှာ လုပျပေးမယျ့ ခေါငျးဆောငျနောကျမှာ ရှိနတေဲ့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျကိုပဲ ကနြျောတို့က ယုံကွညျကိုးစား ရှိစခေငျြတယျ။ ဒါပဲ ကနြျောက ပွောမှာ။ ဗမာပါတီ မဟုတျဘူး။ ရှမျးဆိုလဲ ရှမျးကိုယျစားလှယျလောငျး ရှေးတယျ။ ကယားဆိုလဲ ကယားပွညျနယျ ကိုယျစားလောငျး ရှေးတယျစသညျဖွငျ့ ဒါမြိုးရှိတယျ။ သို့သျောလဲ အကနျ့အသတျရှိတာက ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒအေရ လုပျရတာ။
ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒမှောက အာဏာရတဲ့၊ အနိုငျရတဲ့ပါတီက ဝနျကွီးခြုပျကို ရှေးခှငျ့ရှိတယျဆိုတော့ ဝနျကွီးခြုပျရှေးတယျ။ ဒါမြိုးကတော့ ရှိတယျ။ နောကျတော့မှ တိုငျးရငျးသားတှနေဲ့ နားလညျမှု တညျဆောကျပွီးတော့မှ ဒါကိုအဆငျပွအေောငျ ညှိနှိုငျးတိုငျပငျမယျဆိုရငျလဲ - မတိုငျပငျစရာအကွောငျး မရှိဘူး - တိုငျပငျမယျ၊ ညှိနှိုငျးမယျ၊ ပြော့ပြော့ပြောငျးပြောငျး ဘယျသူရှိလဲ စသညျဖွငျ့ .. အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျက ဒို့နဲ့ပွောလို့ နားဝငျနိုငျလား။ ပြော့ပြော့ပြောငျးပြောငျး လိုကျလြောညီထှေ ရှိမလား။ ဘယျသူက လိုကျလြောညီထှေ ဖွဈသလဲ။ ဒါတှကေို တိုငျးရငျးသားတှေ စဉျးစားဖို့ လိုပါတယျ။ အခုပဲ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံ ဦးဆောငျပွီး (၂၁) ရာစု ပငျလုံမှာ အခကျအခဲ အနောငျ့အယှကျ၊ အဟနျ့အတား အမြိုးမြိုးကွားထဲက ကွိုးစားနတော။ အားလုံးအသိပါ။ ဒါပဲ ကနြျော ပွောခငျြပါတယျ။
မေး ။ ။ ဒါပမေဲ့ တဈခု မကွာသေးခငျြကပဲ ဖွဈသှားတာက ဒေါကျတာဇျောမွငျ့မောငျ ပွောသှားတာက ပွီးခဲ့တဲ့ ဗဟိုကျောမတီ အစညျးအဝေး အပွီးမှာ ထငျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံက ဒီမိုကရစေီ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေး လုပျငနျးတှကေို ဦးစားပေးလုပျဆောငျနတေဲ့ ကာလဖွဈတယျ။ ဒါလဲ မှနျတာပဲ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီအခြိနျမှာ တိုငျးရငျးသားတှကေ ဖယျဒရယျပွညျထောငျစု တညျဆောကျဖို့ကို လုပျဖို့ဆိုပွီး တောငျးဆိုနကွေတာက အသံက ပိုပွီးကယျြကယျြလောငျလောငျ ထှကျနတေယျဆိုတော့ ဒီမိုကရစေီ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးကို လုပျမယျ။ ဖယျဒရယျစနဈ ဖျောဆောငျရေးကို ဒုတိယ ဦးစားပေးအနနေဲ့ လုပျမယျဆိုတဲ့ဟာမြိုးကို ဒေါကျတာဇျောမွငျ့မောငျ ပွောသှားတဲ့အပျေါကိုလဲ နညျးနညျးမကမြေနပျ ဖွဈကွတယျ။ ဆိုတော့ နှဈခုစလုံး တပွိုငျထဲသှားလို့ မရဘူးလားဆိုတာမြိုး စောဒက တကျကွတယျ။ အဲဒီအယူအဆနဲ့ ပတျသကျလို့ ဒီမိုကရစေီ အရငျလား၊ ဖယျဒရယျ အရငျလား။ ဒါမှမဟုတျ နှဈခုပွိုငျတူလားဆိုတဲ့ အယူအဆအပျေါ ဝနျကွီးခြုပျ ဘယျလိုမွငျလဲ။
ဖွေ ။ ။ ဒါကတော့ ဘယျလိုပဲ ပွောနနေေ ဦးဇျောဝငျးလှိုငျလဲ သိပါတယျ -- အင်ျဂလိပျဆိုရိုးစကားလညျး ရှိပါတယျ။ Every coin has two sides. ဆိုတာမြိုးလို ကိုယျ့ဘကျကကွညျ့တော့ ခေါငျး၊ သူ့ဘကျကကွညျ့တော့ ပနျး ဆိုတာမြိုးလို၊ ကနြေျာ့ဘကျကကွညျ့တော့ လကျဖမိုး၊ ခငျမြားဘကျကကွညျ့တော့ လကျဖဝါးပေါ့။ ဘာပဲဖွဈနနေေ အမြိုးမြိုးပွောကွတာတှေ ရှိတယျ။ ဒီမိုကရစေီကို ဦးစားပေးမလား။ စီးပှားရေးကို ဦးစားပေးလုပျမလား။ နှဈခုစလုံး ပွိုငျတူသှားမလား။ နှဈခုစလုံး ပွိုငျတူသှားသငျ့တယျလို့ ပွောတဲ့လူ ရှိသလို၊ ဘယျဟာကို ဦးစားပေး၊ ဒီဟာကို ဦးစားပေး ဆိုတဲ့ပွောဆိုမှုတှလေညျး ရှိတယျ။ အမြိုးမြိုး ပွောကွတယျ။ ကနြျောပွညျနယျမှာဆို မူလတနျးကြောငျး ရှေးတယျ။ အလယျတနျးကြောငျး ကြောငျးဆောငျဆောကျရမယျ။ ဘတျဂကျြခှဲဝမှေုက ကပျြတယျ။ မွို့ပျေါကကြောငျးကိုပေးရငျ ရှာကလူက မကွိုကျဘူး။ ရှာကိုပေးရငျ မွို့ပျေါက မကွိုကျဘူး။ အဲဒီမှာ ကနြျောတို့က စဉျးစားရတယျ၊ ခငျြ့ခြိနျးရတယျ။ ဘယျသူ့ဘယျသူကို ပေးရမှနျးမသိဘူး။ မဲနိုကျလဲ မဲပေါကျတဲ့လူက ကနြေပျတယျ။ မဲမပေါကျတဲ့လူက မကနြေပျဘူး။ လောလောဆယျမှာ အဲဒီပွဿနာ ရှိနတေယျ။ ပွလေညျသှားတယျ။ ဘာဖွဈလို့ ပွလေညျသှားလဲဆိုတော့ ရှာကြောငျးကို မနျးရနေံမွကေ CSR ဆိုတဲ့ လူမှုတာဝနျသိမှုအရ Corporate Social Responsibility အရ သူ့ရနျပုံငှထေဲက ရှာကြောငျးကို ဆောငျပေးမယျ။ မွို့ပျေါမှာပဲ အစိုးရဘတျဂကျြနဲ့ ဆောကျဆိုပွီးရှိတယျ။ ဒါကတော့ ကွညျ့တဲ့လူပျေါမှာပဲ မူတညျပါတယျ။ စတေနာ၊ မတ်ေတာ မှနျလို့ရှိရငျတော့ နားလညျမှုရှိတယျ။ အဆိုးမွငျနရေငျတော့ ဘယျလောကျပဲ ကောငျးအောငျလုပျနေ အဆိုးမွငျနမှောပါ။
မေး ။ ။ ရှေးကောကျပှဲကို ပွောလကျစနဲ့မို့ ရှေးကောကျပှဲကိုပဲ ထပျပွောခငျြတာ၊ မေးခငျြတာက - ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတုနျးက နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုယျတိုငျ ပွောခဲ့တာက လူကိုကွညျ့မရှေးပါနဲ့၊ ပါတီကို ကွညျ့ရှေးပါဆိုပွီး ပွောခဲ့တာကွောငျ့ ပါတီကို လူထုက အကုနျလုံးပုံအောပွီးတော့ ထောကျခံမဲ ပေးခဲ့ကွတယျ။ ဒါကွောငျ့လဲ အပွတျအသတျ အနိုငျရခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုလာမယျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာတော့ အဲဒီတုနျးက အယူအဆဟာ အကြုံးဝငျခငျြမှ ဝငျတော့မယျ။ နညျးနညျးပါတီရဲ့ မူဝါဒကိုပွောငျးပွီးတော့ လူကိုလညျး ကွညျ့ရှေးကွပါဆိုတဲ့ လမျးကွောငျးဘကျကို သှားဖို့သငျ့သလားဆိုတာကို ပါတီဗဟိုကျောမတီကွားမှာ ဆှေးနှေးကွတယျလို့ သိရတယျ။ အဲဒီလမျးကိုပဲ အခုသှားဖို့ ခမြှတျလိုကျပွီလား။ ၂၀၁၅ နဲ့ယှဉျရငျ ဘယျလိုပုံစံနဲ့ ၂၀၂၀ က ဘယျလိုပွောငျးလဲမှုတှေ ရှိလာနိုငျမလဲ။ ကနြျောတို့ ဘယျလိုမြှျောလငျ့ရမလဲ။
ဖွေ ။ ။ ဒါကလဲ ဘာကွောငျ့ပွောရသလဲဆိုတော့ အငျမတနျကို သတိထားရမယျ့အခကျြပါ။ တခြို့မဲဆန်ဒနယျမွတှေေ - နာမညျတော့ ထုတျဖျောမပွောလိုဘူး။ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲမှာ ၂၀၁၂ တုနျးက နိုငျခဲ့တယျ။ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ မှာ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲတှေ လုပျခဲ့တယျ။ အဲဒီမှာ ရှုံးတယျ။ ကိုယျနိုငျရမယျ့နရောတှမှော ရှုံးတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဘေးကကွားရတာ၊ ဝဖေနျခံ သိရတာက ကိုယျပွောတဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးထကျ ကိုယျက nominate လုပျတဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးထကျ အတိုကျအခံပါတီက ကိုယျစားလှယျလောငျးသညျ ရပျထဲရှာထဲမှာ လူရိုသေ၊ ရှငျရိုသေ ရိုးသားဖွောငျ့မတျမှုပဲကွညျ့ကွညျ့၊ ရပျရှာအကြိုးကို ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး၊ လူမှုရေးအပိုငျးတှကေို ဆောငျရှကျတာပဲကွညျ့ကွညျ့၊ အဲဒီမှာ သူကို ရှာကလကျခံနိုငျတဲ့အပိုငျးမှာ ပိုကောငျးနတေယျ။ သို့သျော ဒီလူသညျ အတိုကျအခံ ရှေးတဲ့အခါမှာ လှတျတျောကိုယျစားလှယျအဖွဈ၊ နိုငျငံရေး စိတျမဝငျစားဘူး။ သူကို နညျးမြိုးစုံနဲ့ စညျးရုံးသိမျးသှငျးပွီးတော့ ကိုယျစားလှယျလောငျးဖွဈအောငျ - ကနြျော နိုငျငံရေးနားမလညျဘူး။ နိုငျငံရေး နားလညျစရာမလိုဘူး၊ ကနြျောတို့ဘေးကနေ လိုအပျတာ ပံ့ပိုးမယျ၊ ဗဟုသုတဖွဈအောငျ လုပျပေးမယျ။ လူကွီးမငျး အရှေးခံပေးပါ။ အရပျက လူရိုသေ၊ ရှငျရိုသေ လူတှကေို မရမက စညျးရုံးပွီးတော့ လုပျသှားတဲ့အခြိနျမှာ ယှဉျကွညျ့တဲ့အခါမှာ ကိုယျကတော့ ပါတီဝငျဖွဈတယျ။ ပါတီကို ထောကျခံအားပေးတဲ့လူ ဖွဈတယျ။ သို့သျောလဲ အခုနကိစ်စတှမှော ရပျရှာက လကျခံနိုငျသလား၊ လကျမခံဘူးလား။ လူရိုသရှေငျရိုသေ ဟုတျသလား၊ မဟုတျဘူးလားဆိုတဲ့ နရောတှမှောတော့ ယှဉျလိုကျတဲ့နရောမှာ အားနညျးနတေဲ့သဘောတှေ ရှိနပေါတယျဆိုတော့ ဒါကို ကိုယျတှကေ သတိထားရမယျ။ သတိမထားလို့ကို မဖွဈဘူး။ အရငျတုနျးက ပါတီကိုကွညျ့ပါဆိုတာ အခွအေနအေရ ပွောတာ။ လူကိုအမွငျကတျလို့ ဘာညာမရှိဘူး။ တကယျတမျးမှာ ဘဝအပကျြခံ၊ အသတျအသခေံပွီး လုပျနတော ဘယျသူရှိလို့တုနျး၊ အဖှဲ့ခြုပျပဲ ရှိတယျ။ ဒါကွောငျ့ အဖှဲ့ခြုပျနိုငျဖို့။
အခွအေနကေလဲ ဦးဇျောဝငျးလှိုငျလဲ သိတဲ့အတိုငျးပဲ အပွညျပွညျဆိုငျရာမှာဆိုရငျ မဲစာရငျးပွုစုတာ တဈဖှဲ့က ပွုစုတယျ။ ရှေးကောကျပှဲလုပျတာက တဈဖှဲ့က လုပျတယျ။ ရှေးကောကျပှဲ မသမာမှုတှကေို ဆုံးဖွတျတဲ့ တရားစီရငျရေးက တဈဖှဲ့လုပျတယျ။ သီးသနျ့ (၃) ဖှဲ့လုပျတာ။ ဒီမှာကွတော့ မဲစာရငျးလုပျတာ၊ ရှေးကောကျပှဲလုပျတာ၊ မဲမသမှု၊ ရှေးကောကျပှဲ မသမာမှုတှကေို ဆုံးဖွတျတာ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက လုပျတာ။ အဲဒီအခွအေနမှော ကနြျောတို့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျက ဝငျပွိုငျရတော့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အပွတျအသတျနိုငျဖို့ လိုတယျ။ ဘာမှစဉျးစားမနနေဲ့ အဖှဲ့ခြုပျသာ မဲပေး ဒီလိုရပျတညျခဲ့ရတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခွအေနနေဲ့ အခြိနျအခါအရ အခုနပွောသလိုမြိုး၊ Polish လုပျတာမြိုး၊ … လုပျတာမြိုး ဖွဈကောငျးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒါကိုတော့ ကနျ့ကှကျစရာ မရှိပါဘူး။ ဒီအတိုငျးပဲ ဆုံးဖွတျမယျလို့ ကနြျောထငျတယျ။
မေး ။ ။ ဝနျကွီးခြုပျကိုယျတိုငျက ဒီရှေးကောကျပှဲပွီးရငျ နောကျအစိုးရသကျတမျးမှာ မကှေးတိုငျးမှာပဲ ဆကျပွီးတော့ ဝနျကွီးခြုပျအဖွဈနဲ့ ဆကျရှိနမေလား။ ဒါမှမဟုတျ ပါတီက တခွားတာဝနျတခုခု ပေးခဲ့တယျဆိုရငျ အဲဒီပေးအပျတဲ့ တာဝနျကိုလိုကျပွီး ဆောငျရှကျသှားမလား။ ပါတီဆုံးဖွတျခကျြအတိုငျး လိုကျနာဆောငျရှကျသှာမယျ့ သဘောရှိလား။
ဖွေ ။ ။ အဲဒါက ဒီလိုရှိတယျ။ ကနြျောတို့ ၁၉၉၀ ပွညျ့နှဈတုနျးက ဒီလိုလုပျခဲ့တဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှေ အငျမတနျ နညျးပါတယျ။ ဒီထဲမှာ ပါဝငျပတျသကျပွီး ၂၀၁၂ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲထဲ ပါနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှေ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ပွောရမယျဆိုရငျ အငျမတနျမှနျတယျ။ အငျမတနျတျောတယျ။ ရိုးသားဖွောငျ့မတျမှုလညျး ရှိတယျ။ ဆကျပွီးတော့ လုပျနိုငျသရှေ့ လုပျနမေယျ့ ပုဂ်ဂိုလျတှေ - ခြောကျက ဆရာဦးမွငျ့သိနျး၊ မွိုငျက ဦးမွငျ့အောငျတို့ ဆုံးပါးသှားကွပွီ။ ဒါက ၉၀ ပွညျ့တုနျးက ပါခဲ့တဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှပေါ။ ၉၀ ပွညျ့နှဈ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲမှာ ပါခဲ့တယျ။ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျအဖွဈ ပါဝငျရှေးခယျြခံခဲ့ရတယျ။ ရှေးခယျြခံခဲ့ရပွီးတော့ ဒုက်ခသုက်ခမြိုးစုံ ကွုံရတယျ။ ဖိအားမြိုးစုံ ကွုံရပမေယျ့ ခါးစညျးခံတယျ။ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျအဖွဈက နုတျထှကျမပေးဘူးဆိုတဲ့ ကိုယျစားလှယျတှထေဲမှာ ကနြျောလညျးပါတယျ။ ဒီကွားထဲမှာ အဲဒီအခြိနျတုနျးက အသကျအငယျဆုံး ဖွဈနတေယျ။ (၃၂ - ၃၃) နှဈ။ အငယျဆုံးထဲမှာ ပါနတေော့၊ ကနျြးမာရေးကလညျးကောငျးတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ခေါငျးဆောငျတှဖွေဈတဲ့ နိုငျငံတျောသမ်မတကွီး ဦးဝငျးမွငျ့၊ အမဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၊ ဆရာဇျောမွငျ့မောငျတို့ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ကလညျး ကိုယျ့ကိုယျ ယုံကွညျကိုးစားစှာနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျ တာဝနျပေးမယျဆိုရငျတော့ ဆကျပွီးတော့ တာဝနျထမျးဆောငျဖို့တော့ ဆုံးဖွတျထားပါတယျ။